UN xogta heerka sarrifka ee 02/07/2022 09:30
Yen In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta. Yen qiimaha Oo shilin Soomaali maanta.
Yen In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta
1 Yen (JPY) uyeelaysaan 4.28 Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Oo shilin Soomaali (SOS) uyeelaysaan 0.23 Yen (JPY)
Waxaan beddeleynaa heerka sarrifka Yen to Oo shilin Soomaali 'ee boggan mar maalintii. Sicirka sarifka lacagaha ayaa leh celcelis ahaan qiime maalin kasta marka loo eego natiijooyinka ganacsiga sarrifka waxaana maalintaas loo dejiyey bangiga qaranka. Sicirka sarrifka lacagaha maanta waa aasaaska bangiyada ay ku go'aamiyaan sarrifkooda. Dooro bangiyada leh sarrifka wanaagsan. Goobta tixraaca lacagtayadu waa bilaash oo maalin kasta ayaa la cusbooneysiiyaa.
Sarrifka Dibadda updated 02/07/2022 sida laga soo xigtay xogta UN.
1 Yen hadda waa 4.28 Oo shilin Soomaali ee Yurub. 1 Yen ayaa hoos u dhacay -0.110633 Oo shilin Soomaali maanta ee bangiga ugu weyn Yurub. Yen sicirka sarrifka ayaa maanta hoos u dhacay Oo shilin Soomaali marka loo eego sicirka sarrifka lacagaha Yurub. Maanta, 1 Yen kharashyada 4.28 Oo shilin Soomaali ee bangiga Yurub.
Beddelaan Yen In Oo shilin Soomaali Yen In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex Yen In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Yen In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka maanta 02 July 2022
Aad bay ugu habboon tahay in la isbarbardhigo Yen to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee maalmihii ugu dambeeyay miiska sicirka sarrifka ugu dambeeyay ee boggan. Isbarbar dhig qiimaha sarrifka ee maanta, shalay, iyo maalmihii u dambeeyay si aad u ogaato heerka koritaanka ama dhicitaanka lacagta la doortay. Taariikhda sarrifka lacagaha Yen to Oo shilin Soomaali dhowr maalmood ayaa halkan lagu siiyaa; taariikhda heerka sarrifka ee waqti dheeri ah oo aad ku arki karto adeegyadeena taariikhda sicirka sarrifka Yen to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992. Fahmitaanka dhaqdhaqaaqa wuxuu ku siin doonaa fursad aad ku fahamto heerka sarrifka Yen to Oo shilin Soomaali berrito.
29.06.2022 4.232131 -0.088398 ↓
28.06.2022 4.320529 0.05542 ↑
1 Yen sicirka sarrifka ayaa la eg 4.28 Oo shilin Soomaali. Waayo 5 Yen waxaad u baahan tahay inaad bixiso 21.39 Oo shilin Soomaali. 42.77 Oo shilin Soomaali maanta kharashkiisu waa 10 Yen) ee sicirka sarrifka. Qiimaha 25 Yen sicirka sarrifka waa 106.93 Oo shilin Soomaali. 1 Yen wuxuu hadda la mid yahay 4.28 Oo shilin Soomaali. Heerka rasmiga ah ee bangiga qaranka. 1 Yen wuxuu ku noqday mid ka raqiisan -0.110633 Oo shilin Soomaali maanta marka loo eego heerka sarrifka bangiga dalka.
4.28 SOS 21.39 SOS 42.77 SOS 106.93 SOS 213.86 SOS 427.73 SOS 1 069.32 SOS 2 138.63 SOS
2.34 Yen maanta waa qaali 10 SOS sicirka sarrifka. 11.69 Yen, qiimaha 50 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta. Iibsashada 100 Oo shilin Soomaali for Yen maanta waxaad u baahan tahay inaad bixiso 23.38 JPY. 58.45 Yen maanta waa qaali 250 SOS sicirka sarrifka. Yen sarrifka lacagaha ayaa maanta hoos u dhacaya Oo shilin Soomaali. Maanta, 1 Yen kharashyada 4.28 Oo shilin Soomaali ee bangiga qaranka ee dalka.
2.34 JPY 11.69 JPY 23.38 JPY 58.45 JPY 116.90 JPY 233.79 JPY 584.49 JPY 1 168.97 JPY